Ukwamukeleka kubangani bakho
Mngani, kujwayelekile ukuthi ufisa ukuzizwa wamukelekile kubangani bakho, nase maqembini adumile. Kodwa, kungaba nzima kwesinye isikhathi ngoba abantu abahlukene bathanda izinto ezihlukile. Futhi kuyenzeka ungazwani nawo wonke umuntu – kuyimpilo loku!
Ngabe ukuthola kunzima ukwenza abangani? Awuwedwa! Yizwa ngami: abantu abaningi babanezikhathi lapho bezizwa behlukile kwabanye noma beshiyeke ngaphandle. Kodwa lemizwa iyadlula. Nazi izindlela ongenza ngazo abangani abakulungele…
Zama ukuthola ukuthi wena ungubani, loku kuzokwenza izinto zibe lula. Cabanga ukuthi wena uthandani, yiziphi izinto ezibalulekile kuwena (izinkolelo zakho), nokuthi iziphi izinto ONGAZITHANDI kumngani.
Obani abangani bakho?
Loku kubalulekile, ukuze ukwazi ukuze bazibandakanya nabantu abaphila impilo efana neyakho futhi abanezinkolelo ezifana nezakho. Isibonelo ukuthi angeke wafisa ukuba yingxenye yeqembu labangani abaphuzayo noma ababhemayo uma wena ungazenzi lezozinto.
Zethule kubantu ohlangana nabo ngokuzethemba. Khululeka ube nobungani – loku kuzokwenza kubelula ukwenza abangani abasha.
Okubalulekile ukuthi: ungazishintshi ukuze bakuthande abantu. Uma iqembu lingakuthandi ngendlela oyiyona, abayona inhlobo yakho. Iba uwena, uzobathola abangani abazokuthanda.
Thola ulwazi olwengeziwe ngokuthola abangani abasha, funda isihloko esithi “Indlela yokwenza nokugcina abangane abalungile”